Vivit Collection Ny Kavina Sy Peratra - Famolavolana
Asabotsy 20 Novambra 2021
Ny Kavina Sy Peratra Mahazo aingam-panahy amin'ny endrika hita ao amin'ny natiora ny Vivit Collection dia mamorona fiheverana mahaliana sy mahaliana amin'ny endrika elongated sy swirling. Ny sombin-tsolika dia ahitana lambam-bolamena mavo 18k miaraka amin'ny rhodium mainty manopy ny tarehy ivelany. Ny kavina vita amin'ny ravina dia manodidina ny kavina ka mihetsika ny hetsika voajanahary eo anelanelan'ny mainty sy volamena - manafina sy manambara ny volamena mavo ao ambaniny. Ny fahaizan'ny endrika sy ny toetra ergonomika ao amin'ity famoriam-bola ity dia mampiseho kilalao mahavariana, hazavana, taratra ary fandinihana.
Anaran'ny tetikasa : Vivit Collection, Anaran'ny mpamorona : Brazil & Murgel, Anaran'ny mpanjifa : Brazil & Murgel.
Alakamisy 18 Novambra 2021
Ny Kavina Sy Peratra Brazil & Murgel Vivit Collection